Dib u noqosho oo xagga Itoobiya
Kabista siismada ah ee dib u noqosho ee Itoobiya waa kuwan:
Mu’assasada Shaqowacan (Goedwerk Foundation) waxa ay kuu soo bandhigeysaa xalal ku beegan xaaladdaada shaqsiga ah ee dib u noqosho. Aqoon yahannada qibradda leh, caawinayaasha iyo tababarayaasha ee Mu’assasada Shaqowacan (Goedwerk Foundation) waxa ay kugula hadlaayaan afafka ingriiska, fransiiska, isbaaniya, carabiga, amxaarka, tigrinyaha, farsiga, bashtuuga ama daariga. Waxa ay si taxadder leh kula diyaar gareynaayaan dib u noqoshada iyaga oo tusaale ahaan kugu garab gelaaya helista dokumentiga, booqashada safaaradda, caawinadda caafimaad, la xiriirka xubnaha qooyska, iayagoo kula sameynayo qorshe maalgelin ee kharashka dib ula qabsashada. Waxaa taa barbar socda in haddii loo baahdo ay ku hagi karaan inta aad duuleyso. Hiernaast kunnen zij indien nodig begeleiding op de vlucht bieden. Itoobiya waxa ay Mu’assasada Shaqowacan (Goedwerk Foundation) ku leedahay urur lammane la ah oo inta soo socota wax ka gelik kara: garab gal dib u noqoshada keddib, gegada diyaaradaha in lagaa soo qaado iyo siismada dejjin soo dhoweyn oo wakhti xaddadan ah.
Hey’adda U Adeegta Qaxaatiga (VluchtelingenWerk) ee Itoobiya waxay wada shaqeeyaan ururka Nolawi Services. Waxay iyaga hagaan dadka dib u soo noqday (ha ahaadeen shaqsiyo ama qooysas) sidii aay nolol cusub u bilaabi lahayeen. Waxay taasi ku soo dhowey kartaa soo noqdayaasha gegada diyaaradaha, in ay ku caawinaan raadinta hooy (ku meel gaar ah) ayna iyaga ku garab galaan sida ay shirkad yar u sameyn lahaayeen ama helista shaqo. Waxaa kaloo ay caawinaad ka bixin karaan helista waxbarasho ama xirfad barasho wacan, xiriirro wax gal ah iyo shax waxayna dadka u gudbin karaan haddii loo baahdo hey’adaha caafimaadka. Hey’adda U Adeegta Qaxaatiga (VluchtelingenWerk) waxa ay ilaa iyo sannad keddib dib u noqoshada xiriir la lahaaneysaa ururka lammaanaha u aha si ay ula socdaan sida xaaladdaada tahay.
Haddii aad adiga garab galka IOM xulatay, waxaa ku caawinaaya shaqaale xafiiska-IOM ee Itoobiya sidii aad u maareyn lahayd kharashka-dabiiciga ah. Waxa aad khrashkaas u adeegsan kartaa tusaale ahaan kiro, xirfad barasho, tababar, iibka shirkad, iwl.